PSG oo ku Wargalisay Adrien Rabiot inuu ku Biiri karo kooxda Barcelona – Gool FM
PSG oo ku Wargalisay Adrien Rabiot inuu ku Biiri karo kooxda Barcelona
CR Shariif November 7, 2018
( Paris ) 07 Nof 2018. Heshiiska uu kula jiro Rabiot kooxda PSG ayaa dhacaya xagaaga dambe waxaana soo ilaaday wadahadaladii u dhaxeeyay laacibka reer France iyo maamulka kooxda.
Agaasimaha cayaaraha PSG Antero Henrique, ayaa aad kaga carooday dalabaadka laacibka Rabiot, wuxuuna ku wargaliyay inuu u dhaqaaqo Barcelona hadii la lagu heshiiyo qiimaha uu ugu dhaqaaqo naadiga Nou Camp.
Nasser Al-Kehlaifi, oo ah madaxweynaha kooxda PSG, ayaa wax ka ogaaday wax yaabaha burburyiyay wada xaajoogka u dhaxeeyay Henrique iyo Rabiot talaadadii, waxayna warbaahinta French sheegayaa in United ay sido kale xiiseyneyso cayaariyahankan.
23-jirkaan ayaa waxaa wakiil u ah hooyadii, waana mid kamida da’yarta ugu waxqabadka wanaagsan laacibiinta haatan ee qadka dhexe.
Macalinka PSG Thomas Tuchel ayaa horay ula hadlay laacibka wuxuuna u sheegay inuu doonayo joogitaanka Parc des Princes.
Laakiin waxaa soo baxaya in hadda uu laacibka ka waayay dalabaadkiisa kooxda waxyna taa soo dadajineysaa bixitaankiisa.
Rabiot ayaa la warinayaa in laga tagay safka 11-ka cayaariyahan ee saf kowaad kulakii ay PSG la cayaartay Marseille gabayaaqadii bisha October, kaddib markii uu kasoo daahay waqtiga uu soo xaadiri lahaa madaama uu daawanayay kulankii Clasico ee 5-1 lagu xasuuqay Real Madrid.
Ernesto Valverde oo qeexay sababta uusan u ciyaarin Lionel Messi kulankii xalay ee Inter Milan
“Jordi Alba wuxuu bixinayaa qaab ciyaareed cajiib ah, balse uma yeerayo” - Luis Enrique